वैदेशिक रोजगारी : ठगीका अनेक रुप | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / वैदेशिक रोजगारी : ठगीका अनेक रुप
वैदेशिक रोजगारी : ठगीका अनेक रुप
Posted by: युगबोध in प्रमुख समाचार, स्लाइड May 15, 2019	0 76 Views
प्रतिनिधि घटना १.
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका पा“चजना युवकलाई गाउ“ नजिकैका एक व्यक्तिले क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै प्रतिव्यक्ति डेढ लाख मागे । क्यानडा वर्किङ भिसामा जा“दा राम्रै कमाइ हुने भएपछि पा“चजनाले नगद रकम बुझाए ।
ती व्यक्तिले उनीहरुलाई काठमाडौं बोलाए । तर पक्रिया अलि लामो लाग्ने बताए  । झण्डै वर्षदिन बित्दा पनि प्रक्रिया नमिलेपछि उनीहरु आत्तिए । उता पैसा लिएका दलाल सम्पर्कबाट बाहिरिए । ‘वर्ष दिनसम्म झुलाएपछि आफूहरु ठगिएको महसुस ग¥यौं’– पीडित युवकमध्ये एकले भने । समयमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको आप्रवासी सेवा केन्द्रमा पुगेपछि उनीहरुले ठगिएको पैसा फिर्ता पाउन सफल भए ।
प्रतिनिधि घटना २.
घोराही–१५ का २२ वर्षीय रुपक घर्तीलाई प्लस टु सकेपछि विदेश जाने
हुट्हुटी चल्यो । साथीकै अंकल पर्नेले उहा“लाई क्यानडा पठाइदिने विश्वास दिलाए । राम्रो कमाइ र काम दिलाइदिने भनेपछि उहा“ले तीन पटक गरी नगद तीन लाख र पासपोर्ट बुझाउनुभयो । बा“की रकम भने एयरपोर्टमै बुझाउने सम्झौता थियो ।
तर वर्षदिन बित्दासमेत उहा“ विदेशिन सक्नु भएन । उता, विदेश किन नपठाएको भनेर फोन गर्दा ती व्यक्तिले उल्टै नआत्तिन भनेर हप्काए । त्यसपछि भने उहा“को मनमा चिसो पस्यो । ती व्यक्तिस“ग विदेश जाने सोच त्यागेको बताउ“दै पैसा फिर्ता माग्नुभयो । तर पटक–पटक फोन गर्दा नउठाएपछि उनी सम्पर्कबाट बाहिरिए । त्यसयता अहिलेसम्म ती व्यक्ति सम्पर्कमा आएका छैनन् । ‘ऋण काढेर बुझाएको पैसा पानीमा गयो’– उहा“ भन्नहुन्छ– ‘न घर न घाटको भइयो । अब त पैसा फिर्ता आउला भन्ने पनि आश छैन ।’
प्रतिनिधि घटना ३.
घोराही–५ का नवीन चौधरी वर्ष दिनअघि खाडी दे श दुबई पुग्नुुभयो । चिनजान र विश्वासकै भरमा दुई लाख बुझाएर मासिक ५५ हजार कमाउने आशामा उहा“ भिजिट भिसामा भारतको बाटो हुदै उड्नुभयो । तर सम्झौतामा भनेजस्तो भएन । तीन महिना उतै अलपत्र पर्नुभयो । यता, विदेश पठाउने भन्दै पैसा लिएका ती व्यक्ति तीन हप्तादेखि सम्पर्कबिहीन थिए ।
घरपरिवारको सहयोगमा उहालाई जेनेतन उद्धार गरियो । तर सम्पर्कविहीन भएका ती व्यक्तिबाट रकम फिर्ता भने पाउनुभएन । ‘ठगिएर स्वदेश फर्किएपछि विदेशको सपना देख्न छाडिसके’– उहा भन्नुहुन्छ– ‘भोकै मर्छु तर विदेश जान्न ।’
वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगिने उनीहरुमात्रै भने होइनन् । जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिनेको संख्या धेरै छ । आप्रवासन स्रोत केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २६ जनाले ठगीमा परेको निवदेन दिएका छन् । जस अनुसार ठगबाट उठाउनुपर्ने कुल रकम ३४ लाख रुपैया“ छ । तर केन्द्रमा परेका ती निवेदनको आधारमा अहिलेसम्म छजनाको गरी सात लाख रुपैया“ मात्रै फिर्ता भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी आवश्यक परामर्शस“गै ठगी र उद्धारका मुद्दाहरु हेर्दा ठगीमा परेर केन्द्रमा आउनेको संख्या धेरै छ । परामर्शकर्ता राजेन्द्र केसी भन्नहुन्छ–
‘हामीस“ग आइपुगेको घटना मात्रै हुन यी । नआइपुगेको संख्या त कति छ कति ।’
आप्रवासन स्रोत केन्द्रमा आएका निवदेन हेर्दा ठगीका अनेक रुप छन् । परामर्शकर्ता केसीको भनाइमा सम्झौताअनुसार काम र तलब नहुनु । एक ठाउ भनेर अर्काे ठाउ“मा पु¥याउनु र भिजिट भिसामा लगेर अलपत्र पार्ने जस्ता ठगीका प्रकृति छन् । त्यसबाहेक कतिलाई भने पैसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने , पैसा लिएर भाग्ने र राहदानी फिर्ता नगर्ने जस्ता ठगीका निवेदन धेरै छन् । ‘ठगीका प्रकृति हेर्दा अधिकांश राम्रो कमाइ हुने प्रलोभन देखाउने र पैसा पाएपछि वेपत्ता हुने गरेको पाइन्छ’– परामशकर्ता केसी भन्नुहुन्छ ।
ठगीमा परेर आएका निवेदन हेर्दा अधिकांश गैर एजेन्टबाटै ठगिएका छन् । सरकारले मान्यता दिएको एजेन्ट भन्दा गाउघर र छरछिमेकमा विदेश पठाउने भन्दै भेटिने गैरएजेन्टबाटै बढी ठगिने गरेको अर्की परामर्शकर्ता बसन्ता पुन बताउनुहुन्छ । ‘धेरै कमाइ हुने प्रलोभन देखाएर गैरएजेन्टहरुले पैसा र पासपोर्ट माग्छन् । अनेक बहाना देखाउ“दै लामो समय झुलाउछन्’– उहा भन्नुहुन्छ– ‘पछि ठगेर आफै वेपत्ता हुन्छन् ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जा“दा चाहिने सचेतनाको अभाव र ठगिन सक्छु भन्ने हेक्का नराख्दा ठगिन पुग्ने पुन बताउनुहुन्छ ।
त्यसो त वैदेशिक रोजागारीमा विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्नेमा प्रायः गाउ समाज र नजिकका आफन्त छन् । परामर्शकर्ता केसी र पुनको भनाइमा आफन्त, चिनेजानेका र गाउ“–ठाउ“कै मान्छेको प्रलो भन र विश्वासमा सजिलै ठगिन पुग्छन् ।
Previous: लुम्बिनी भ्रमण वर्षको उत्कर्ष
Next: व्यवस्था फेरियो समस्या उस्तै : तिरो तिर्न लमही, पास गर्न तुलसीपुर
दाङमा एक अर्ब ६८ करोड विकास बजेट फ्रिज